Umfokazi: Isivumelwano sesivele sinenqola, vumela ukuthwalwa yinsolo | Izindaba zamagajethi
Umfokazi: Isivumelwano sesivele sinenqola, vumela ukuthi uthathwe ukusola
Unyaka we-2017 uqhamuka ngokufika kwesikrini esikhulu samafilimu amabili angabeka uphawu ngaphambi nangemva kwama-sagas asetshenziswe kakhulu. Sikhuluma ngakho Owakhile omubi futhi of Umfokazi. Ngalesi sikhathi sizogxila kulowo ozihambelayo, hhayi ngqo ku-ET kaSteven Spielberg, kepha ohlangothini olumnyama lwabagibeli abangafuneki. URidley Scott ubuyisela ama-ovaloli akhe ukuze akhiphe lesi saga esihlahleni saso, futhi siyethemba ukuthi bazombulala njengoba emfanele. Sikushiya i-trailer ye Umfokazi: Isivumelwano ngakho-ke ungasaba kancane ngenkathi ulinde i-movie.
Le filimu izoba yindlela yokulandelwa kwabagxekayo Prometheus (ngokombono wami ngesinye se-saga esibi kunazo zonke, kude kakhulu), ukuxazulula le ndaba nokubeka izinto ngokulandelana kwazo. Kubathandi be-saga, lokhu kungaba yi-prequel esheshayo yoku Umfokazi: Umgibeli Wesishiyagalombili, ifilimu futhi eqondiswe nguRidley Scott, omunye walabo baqondisi abenza lutho olubi. Ngalesi sikhathi umkhumbi ufinyelela kwiplanethi ekude ebibukeka ngathi "ifile" kodwa kungenjalo. UMichael Fassbender uzovela enkundleni (engaqinisekisi ngabalingisi abanentshisekelo) edlala noDavid, osindile kulolu hambo U-Prometheus, iminyaka engaphansi kwengu-10.
I-trailer izokushiya uvule umlomo njengoba usishiyile. Ukumiswa, imisindo, ubumnyama nokugijima. Kufanele ugijime, ngoba uma kungenjalo i-Alien izovela futhi uzoba nesikhathi esibi. Ukuzivocavoca ekusindeni okungeke kushiye noma ngubani othanda isaga engenandaba, Ngoba ake sibhekane nakho, kunesiginesha kaRidley Scott, ubumnyama, izibani kanye nabanye abalingiswa abanekhono ababonakala bengazi nhlobo ukuthi bazitholaphi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » Umfokazi: Isivumelwano sesivele sinenqola, vumela ukuthi uthathwe ukusola
ICyanogen izovala iminyango yayo ngoDisemba 31